Ama-alias: Izinqamuleli Zokugcina | Kusuka kuLinux
Ama-aliases: Izinqamuleli zesikhumulo
Maxwell | | I-GNU / Linux, Okunye, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Akukho okufana ne-terminal, ubulula bayo, ukusebenza kwayo kahle kanye nejubane layo okusisizayo osukwini lwethu nosuku xazulula imisebenzi eziyisisekelo noma eziyinkimbinkimbi, kusuka ekuqambeni kabusha amaqoqo amakhulu wamafayela, noma nokuguqula umtapo wolwazi wethu womculo ube yifomethi ye-vorbis. Konke kwenza esikhathini se- isikhathi esincane kakhulu kunabalingani babo bokuqhafaza.
Kepha senzani lapho kufanele ngekhanda inani elikhulu lemiyalo?.
Ake sicabange njengomsebenzisi ojwayelekile: Bangazizwa bekhungathekile kakhulu inani lemiyalo okufanele bayisebenzise, ​​ngobunzima babo nemisebenzi yabo ehlukile (futhi angibasoli ngempela). Ekuboneni kokuqala izinto ezinjengalezi zingakuphonsa emuva lapho uqala ukusebenzisa i-terminal. Mane ubale izikhathi esizwe ngazo okufana nokuthi:
«Hheyi, wawunjani lowo myalo wokufaka ukhiye we-usb? Ngimbeke kabi futhi ngaphezulu kunginike iphutha»
Noma funda okuthile cishe okungenakugwemeka:
Futhi ngaphandle kokuthi sibe "nephepha lokukhohlisa" elihle ngayo yonke imiyalo yethu, noma ukwehluleka lokho kube yimemori enhle, besingeke siphume 100% kukhonsoli yethu. Uma uvame ukusebenzisa i-terminal ngamandla, ngeke uphike ukuthi ngemuva kokubhala imiyalo eminingi kangaka bangasidida, futhi basicasule. Ngenhlanhla sinayo alias, sithathe umyalo omude futhi obanzi futhi sawabela isinqamuleli esincane, esifushanisiwe, okulula ukusikhumbula nokubhala.
Impela kuzoshesha futhi kube lula ngawe ukuthayipha lokhu:
Ukwenza lokhu, okumele ukwenze ukuvula ifayela lakho kusihleli sombhalo. .bashrc (uma usebenzisa igobolondo njenge bashuma usebenzisa zhs bangene .zshrc), bese ungeza okufana:
Futhi akupheleli lapho, singangeza imisebenzi eminingi ewusizo, kusuka ekuvuleni uziphu, ukulalela umculo ngokungahleliwe kusuka enkombeni, ukucindezela, ukwazi usuku, izikhumbuzo, ukuhamba phakathi kwezinkomba, njll.
Kungenzeka futhi ukuthi ungeze umbala othile kubo nge- "echo" futhi uxoxele nemicimbi yomsindo kubo nge- yobe o olg123.
Ezinye izibonelo eziyisisekelo ngokuhamba kwemikhombandlela:
Noma, ukwenza okuthile okuyinkimbinkimbi kakhulu, okulungile kakhulu kungaba bhala umbhalo ohlukile, ukuze singagcwalisi ifayili lethu kakhulu .bashrc.
Ekugcineni ngishiya ezinye izibizo zami, uqobo:
Futhi unama-aliases amahle ongabelana ngawo?
Futhi ngalokhu siphetha lokhu kubuyekezwa okuncane kuma-aliases nokusetshenziswa kwawo, khumbula ukuthi uma ufuna ukuqeda noma yimaphi ama-aliases ungasebenzisa insiza alias:
Ukususa zonke izibizo kufayela le- .bashrc.
Noma, uma umuntu ebahlukumeza kungenzeka ukuthi ugcina ukhohlwe imiyalo yangempela (njengami) kungcono kakhulu ukuzisebenzisa kancane.
Ngiyethemba ukuthi manje uma ungathola ijusi ethe xaxa kumatheminali akho, manje ukonga okungenani isikhashana. Nibe nempelasonto enhle kakhulu, sizofunda ngokuhamba kwesikhathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Ama-aliases: Izinqamuleli zesikhumulo
Izibizo ezibusisiwe ezenza impilo ibe lula kithina, zisenza ubuvila ngokwengeziwe. i-xD
Bengikade ngiba nokuningi kakhulu kepha njengoba usho, ekugcineni ugcina ukhohlwa imiyalo yangempela ngakho-ke manje ngisebenzisa okumbalwa ukusetha okuncamelayo.
Ukubingelela ne-athikili enhle.
Kwenzeka into efanayo kimi ... ngagcina ngikhohlwa umyalo, ngoba ngangisebenzisa ama-aliases kukho konke haha ​​...
Manje ngisebenzisa eyodwa ukufaka ama-ISOs futhi ukukhipha umsindo kufayela levidiyo, izinto ezimbili engingavamile ukuzenza hehe 😉
Ukubingelela ne-athikili enhle 😀
Ngiyabonga, ngiyajabula ukuthi kube wusizo.
Uma kuyiqiniso umuntu ugcina ekhohlwa imiyalo eminingi yangempela hahaha xD, yingakho ngiyisebenzisa kuphela manje ukukhipha iSudo, futhi ngicabanga ukuthi angisoze ngawukhohlwa lowo.
Yize uma ngikhohlwe umyalo othile 'we-apropos' insindiso.
Ungakha i-cube yomyalo ^ __ ^ → https://lh4.googleusercontent.com/-aiKpcw5Fk0s/T1LDUJ_ZhLI/AAAAAAAADak/NWgjNeGWF-g/s800/debian_cubo_comandos2.png
hhawu! Yeka ukuthi zifuna ukwazi kangakanani, futhi zinkulu kangakanani lezi zinhlayiya, bengingazazi.
Futhi ukudada i-xD, ngithola ukuthi kukhona ama-chops ngisho nama-emac, kepha angiboni lutho lweChakra. Ngizobona ukuthi ngenza eyodwa bese ngilaba lapha.
Eqinisweni sibeka isikhathi esithile esidlule lapha hehe: https://blog.desdelinux.net/cubos-comandos-para-distros-gnulinux/
ikati le-bash-4.1 $ .bashrc
alias ls = »ls -p -color = okuzenzakalelayo»
Leyo yifayela lami le-.bashrc xD
Ngangivame ukusebenzisa ama-aliases kancane, kepha hhayi kuze kube seqophelweni lokukhohlwa imiyalo yoqobo… Impela ziwusizo olukhulu 🙂
Ama-Desktops anamuhla: Isitayela se-Xfce ne-KDE Mac
I-KSplash noma i-'Special 'BootSplash ye-ArchLinux ne-Chakra Linux